Sohonet သည်မီဒီယာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုတိမ်အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Sohonet မီဒီယာဆန်းသစ်တီထွင်မှုတိမ်တိုက်မဟာမိတ်အဖွဲ့ပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
Sohonet, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ, မီဒီယာန်ဆောင်မှုများနှင့်ကွန်ယက်လုံခြုံရေးမီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမီဒီယာဆန်းသစ်တီထွင်မှုတိမ်တိုက်မဟာမိတ်ပူးပေါင်းပြီ. အဆိုပါညွန့်ပေါင်းကလက်ရှိအဓိကမိုဃ်းတိမ်ကိုပံ့ပိုးပေးဖို့သိသိသာသာပိုပြီးကုန်ကျစရိတ်ထိရောက်သောသောစျေးနှုန်း-performance ကိုအချိုးကယ်လွှတ်ခြင်းငှါ, မျိုးစုံမိုဃ်းတိမ်ကိုစီးဖြတ်ပြီးပေါင်းစပ်, ဦးဆောင်မီဒီယာနည်းပညာကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းထားသည်။
မဟာမိတ်များ၏မစ်ရှင်ကစျေးသက်သာသော monolithic ပထမဦးဆုံးမျိုးဆက်မိုဃ်းတိမ်ကိုထပ်တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်လွတ်လပ်သော, လာမယ့်မျိုးဆက်အပေါ်မှာမိုဃ်းတိမ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုမူတည်ပြီးမှမီဒီယာကုမ္ပဏီများသည်ကို enable ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ကကမ်းလှမ်းန်ဆောင်မှုများသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်စာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုမှတဆင့်ပြန်ဖွင်နှင့်ဖြန့်ဝေရန်, တည်းဖြတ်နှင့်အသွင်ပြောင်းဖို့, content တွေကိုဖန်တီးမှုကနေမီဒီယာဘဝမှတ်တိုင်သံသရာစက်ဝိုင်း span ။
"ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေနှင့်ဘတ်ဂျက်ကိုလည်းမိုဃ်းတိမ်ကိုအသုံးချဖို့ကြီးထွားလာလိုအပ်ချက်ရှိတော်မူသောငါတို့၏ client များအတွက်တသမတ်တည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်" ဟု Sohonet CEO ဖြစ်သူ Chuck က Parker ကပြောသည်။ ကုန်ကြမ်းကင်မရာ backup လုပ်ထားနှင့်ဆင်းသက်လာ Workflows, Multi-မိုဃ်းတိမ်ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု, မီဒီယာထုတ်လုပ်မှု orchestration, archive ကိုနှင့်သိုလှောင်မှု: "ဒီမဟာမိတ်အဖွဲ့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရလိုအပ်ကြောင်းဖြည့်ဆည်းကြောင်း Workflows နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အညီအမျှအရေးကြီးသော Egress အခကြေးငွေမျိုးစုံမိုဃ်းတိမ်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးအကြားလုပ်ငန်းအသွားအလာပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကန့်သတ်ရန်လေ့အထူးသဖြင့်ဘယ်မှာအလျင်အမြန်သူတို့အား Workflows လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နိုင်စွမ်းသည်နှင့်ထိထိရောက်ရောက်ကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ "
Archiware (backup လုပ်ထားနှင့် archive ကို)
Cinnafilm (transcoding နှင့် image processing တွင်),
IO (archive ကိုရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုများနှင့်သိုလှောင်မှု orchestration)
ဘက်ပေါင်းစုံမီဒီယာနည်းပညာများ, Inc (စနစ်များကိုပေါင်းစပ်)
အဆင့်ဆင့်အပြင် (မီဒီယာထုတ်လုပ်မှု orchestration)
Masstech (အကြောင်းအရာ archive ကို & storage ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု)
Marquis (ဘေးဥပဒ်ကိုပြန်လည်နာလန်ထူ, backup လုပ်ထား, archive ကို in-သည်မိုဃ်းတိမ်စီမံကိန်းကို versioning),
Versity (ကြီးမားသော archive ကိုဒေတာစီမံခန့်ခွဲမှု)
XenData (တက်ကြွစွာ archive ကို)
Sohonet အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက, Booth သွားရောက်ကြည့်ရှု SL14205 NAB မှာအောက်ပိုင်းတောင်ခန်းမတွင်သို့မဟုတ်သွားပါ www.Sohonet.com.
2019 NAB ပြရန် Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida တည်းဖြတ်ခြင်း ပေါင်းစည်းမှု SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 Sohonet လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် 2019-03-28